သောသီခို: ကမ္ဘာ့ အရှည်ဆုံး လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ တစ်ခု ချုပ် ငြိမ်းဖွယ်ရာ ရှိလာ လေပြီးလော
Written by မင်းသွေးနီ (ရာမည)
ဒီအတိုင်း တစ်ကယ် ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ အရှည်ကြာဆုံး ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ တစ်ခု နိဂုံး ချုပ်နိုင်တော့ မယ်လို့ ကြိုတင် မြင်ယောင် မိလေသော အခါ၌။ ပြောသလောက် လက်တွေ့ ဘယ်လောက် ဖြစ်လေ မည်လဲဆိုသည်မှာ နိုင်ငံရေး လေ့လာသူတွေ နိုင်ငံ တကာ အသိုင်း အဝိုင်းတွေက သုံးသပ်လို့ မဆုံး ဆဲပဲ။
ဦးသိန်းစိန် ကတော့ ရဲဝံ့ စွာနဲ့ပဲ “မကြာခင် အချိန်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုး ကြဖို့ အထိ အစိုးရနဲ့ လက်နက်ကိုင် တိုင်း ရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ အကြား သဘော တူညီချက်တွေ ရရှိထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းရဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ ထည့်သွင်း ပြောကြား သွားတယ်။
ရိုးရိုး ရှင်းရှင်း ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး သမားတွေ အပါအဝင် နိုင်ငံ တကာ အသိုင်းအဝိုင်း တွေက မြန်မာ့ရဲ့ နိုင်ငံရေးနွေဦးကို စောင့်ကြည့်ပြီး သုံး သပ် နေတာထက် ပိုပြီး ဝင်ရောက် ပူးပေါင်း လာတာမျိုး မတွေ့ရသေးဘူးလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒါကို အားမလို အားမရ ဖြစ်ရမှာလား ၊ ဝမ်းသာရမှာလား ဆိုတာ ကတော့ ဒီနိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းကို သုံးသပ်တဲ့ လူတွေ အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ အချို့ ကတော့ မြန်မာ့ ပြည်တွင်ရေး ပြသနာဟာ နိုင်ငံတကာ အစိုးရက ဖိအားပေး ဖြေရှင်းစေခြင်းကို လက်မခံ နိုင်ကြသလို ၊ အချို့ ကလည်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်း အဝိုင်းက မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဒုက္ခ တွေကို စာနာမှု မဲ့ကြောင်း ဝေဖန် ကြပါတယ်။
သမိုင်း တစ်လျှောက်ကို ပြန်ကြည့်မယ် ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခဟာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရ စစ်တပ်တွေ ကြားမှာ နှစ်ပေါင်း ရှည်ကြာစွာ ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ် ခြောက်ခု တိုင်တော့မယ်။
ဒီပဋိပက္ခရဲ့ အရင်းခံ ပြသနာကို ဆန်းစစ် ကြည့်မိတော့ တိုင်းရင်းသားတွေ တောင်းဆို ကြတဲ့ “တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်” ပြသနာ ကစခဲ့တာပဲ။
ဒီတောင်းဆို သံကြောင့် ဆယ်စုနှစ် ခြောက်ခုလောက်တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ သေနတ်သံတွေ ဝေလို့ ယမ်းငွေ့တွေ စွေခဲ့ ရတယ်၊ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်ဘော လအော ပေါ်ထွက် လာတယ်။ ဒါ့ထက်ကို တိုင်းရင်းသား တွေက အစိုးရ အပေါင်းအပါနဲ့ စစ်တပ်ကိုမျက်လုံးစိမ်း တွေနဲ့ သံသယ တွေထားပြီး ကြည့်ခဲ့ ပါတယ်။ ယခု တိုင်အောင် နှစ်ဖက် အကြား “ယုံကြည်မှု ထားနိုင်ရေး” ဆိုတဲ့ ပြသနာက အဖြေရှာလို့ မရ သေးတဲ့ အရာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်မှတ် ရရ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လဆန်းမှာ တောင်ကြီးမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်း မီဒီယာ ညီလာခံ သွားတက် ခဲ့တုန်း မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာ (MPC) က ကိုအောင်နိုင်ဦးရဲ့ စကားဝိုင်း ထဲကစကား အချို့ကို သတိရမိတယ်။
“နှစ်ဖက် အကြား “ယုံကြည်မှု” ဆိုတာက ဘာနဲ့ တူသလဲ ဆိုတော့ သစ်ပင် တစ်ပင်ရဲ့ သစ်မြစ်နဲ့ တူတယ်၊ အဲဒီ အမြစ်သွယ်လေးတွေ ပျောက်ကွယ် နေတာ ဆယ်စုနှစ် ခြောက်ခု နီးပါး ၊ ဒါကို တစ်ထိုင်တည်း ပြန်ရှင်သန်စေဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ “ယုံကြည်မှု” ကြီးထွား နိုင်မယ့် နိုင်ငံရေး ရာသီဥတု၊မြေ၊ လေ၊ ပတ် ဝန်း ကျင် လိုအပ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီစကားကို ပြန်သုံး သပ်ကြည့်တော့ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ယနေ့ နိုင်ငံရေး ရာသီ ဥတုက ယုံကြည်မှု အမြစ်သွယ် လေးတွေ ရှင်သန်ဖို့ အချိန်အခါ ရောက်ပြီလား ? ရေ ခံ၊ မြေခံ၊ ပတ်ဝန်းကျင်က ဒီ “ယုံကြည်မှု” ဖွံ့ဖြိုးဖို့သဟဇာတ ဖြစ်လေ ပြီလား ?
လက်ရှိ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်တွေနဲ့ အစိုးရ တပ်တွေ အကြားမှာ ထိတွေ့မှု တိုက်ပွဲ လေးတွေ ဖြစ်နေ ကြတုန်း ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီတိုက်ပွဲ တွေကို အဆုံးသတ်ဖို့ တိုင်းရင်းသား တွေရဲ့ ဖြေရှင်းရေး နည်းနာကနှစ်ဖက် စစ်သည်တော်တွေ လိုက်နာ ရမယ့် ကျင့်ဝတ် “Code of conduct” နဲ့ နှစ်ဖက် တပ်တွေနေ ရာ ချထားရေး အတိအကျ သတ်မှတ်ဖို့ ဆိုပြီး အစိုးရကိုရော ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကိုရောတင်ပြ ထားတာ ရှိပါတယ်။ အခုထိ အကောင်အထည် မပေါ်သေး ပါ ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီအတိုင်း ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ထိတွေ့ မှုတွေ ဆက်ရှိ နေဦး မှာပဲ။ ဆိုတော့ ယုံကြည်မှုက လျော့ရဲ နေမှာပဲ။ ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ ချုပ်ငြိမ်းဖို့ ဆိုတာ အားချိချိနဲ့ လျှောက်နေ ရတဲ့ ခြေလှမ်း လေးတွေဖြစ်နေ ဦးမှာပဲ။
အစိုးရဆီမှာလည်း စိုးရိမ်မှု ပြသနာတွေနဲ့
ပြသနာဖြေရှင်းဖို့ ဆိုတာ နှစ်ဖက် စလုံးမှာ ဒီပြသနာကို ဖြေရှင်း ကြစို့လို့ ဆိုတဲ့ “Willing” ဆန္ဒ ရှိကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု သုံးသပ် ကြည့်တော့ နှစ်ဖက် စလုံး က “Willing” ဆိုတဲ့ ဆန္ဒအပြည့်အဝ ရှိတယ်။ ပြည်တွင်း စစ်ကြောင့် တခြား နိုင်ငံတွေ ထက် ကျွှန်တော်တို့ နိုင်ငံနိုင်ငံ၊ စီးပွား၊ လူမှု ၊ နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစ စ နောက်ကောက် ကျခဲ့ရတယ်။
တစ်ဖက်က လည်းကျေးလက်နဲ့ နယ်စပ် ဒေသနေ တိုင်းရင်း သားတွေ အနေနဲ့ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး နောက်ကျမှု၊ ပညာသင်ကြား နိုင်ခွင့် ၊ စီးပွား ရှာဖွေ နိုင်ခွင့်တွေ ယမ်းငွေ့ တွေနဲ့အတူ မျှော်လင့်ချက် မဲ့ခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပြသနာကို အစိုးရ ဘက်ကရော တိုင်းရင်းသားတွေ ဘက်ကပါ ဖြေရှင်းဖို့ “ဆန္ဒ” ရှိနေ ကြတယ် ဆိုတာ သံသယ ရှိစရာ မဟုတ်တော့ဘူး။
ဒါပေမယ့်ဒီပြသနာ ဖြေရှင်းဖို့ ချဉ်းကပ် ကြတဲ့ အခါမှတော့ အထက်က ကျွှန်တော် တင်ပြ ခဲ့သလိုပဲ ဒီလောက်များပြားတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်တွေကို စနစ် တကျ နေရာ ပြန်လည် ချထားဖို့ဆိုတာ တယ်လွယ်တဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်သလို မကိုင်တွယ် တတ်ပါကလည်း “ထိုင်နေရင် အကောင်း သား၊ ထသွားမှကျိုးမှန်းသိ” ဆိုတာမျိုး ဖြစ်သွားဦးမယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း အစိုးရနဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ Mind Set (စိတ်အစွဲ) မှာ သမိုင်း စဉ်ဆက် ရှိခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေခွဲထွက် ကြမယ်ဆိုရင် ဟူသည့် စိုးရိမ်မှု ကလည်း ဒီပြ သနာ ကို သိမ်မွေ့စွာ ကိုင်တွယ်ဖို့သတိတရား ပေးနေသလို ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ့ အမျိုးသား ရင်ကြား စေ့ရေး အစီအစဉ်မှာ ပါဝင် ဆောက်ရွက် နေတဲ့ တောင်အာဖရိက ပညာရှင် တစ်ဦးနဲ့ ရန်ကုန် ရောက်တုန်း စကား ပြော ခွင့် ရခဲ့တဲ့ အတွေ့ အကြုံလေးဝေမျှ ပါရစေ။
“နှစ်ဖက်စလုံး (အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား) တွေက “ယုံကြည်မှု” တည်ဆောက်ခြင်း ဆိုတဲ့ အပေါ်ကိုသံသယ တွေထားပြီး ချဉ်းကပ် နေကြတုန်းပဲ ဆိုတာ ထင်ရှား ပါတယ်၊ ဥပမာ - တိုင်းရင်းသားတွေတင်ပြ ထားတဲ့ အမျိုးသား ရင်ကြား စေ့ရေး အစီအစဉ်နဲ့ အစိုးရ ဘက်က တင်ပြ ထားတဲ့ အမျိုးသားရင်ကြား စေ့ရေး အစီအ စဉ် တွေကို ကြည့်ရင် မြင်သာတယ်၊ ဒီလို စိုးရိမ်မှု တွေကြောင့် ထည့်သွင်းရေးဆွဲ ထားတဲ့ အခြေအနေ တွေက အမျိုးသား ရင်ကြား စေ့ရေး အစီအစဉ်ရဲ့ ရာနှု န်း တော်တော်များများ ဖြစ်ပါသေးတယ်” ဟု ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းရေး ဆိုင်ရာ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး တောင် အာဖရိက ပညာရှင်က ဆိုပါသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နွေဦး ရာသီ သာယာ ဖို့ကတော့ လွယ်မယောင်နဲ့ခက် တိမ်မယောင်နဲ့ နက်နေ တုန်းပါပဲ။ဒါပေမယ့် လမ်းကြောင်းမှန် ဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်း ချင်တဲ့ “ဆန္ဒ” အပေါ်မှာ နှစ်ဖက်စလုံးကအခြေခံ ချဉ်းကပ်ကြတာ ဖြစ်လို့ ဒါက မှန်ကန်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှု လမ်းကြောင်း အဖြစ် ရှူ့မြင်လို့ရပါတယ်။
သို့ပေမယ့်အထက်က သမ္မတကြီး ပြောထားသလို နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်နီးပါး ကြာမြင့် လာပြီ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ ချုပ်ငြိမ်းရေး ကို မျှော်ေ တွးပြီး ဒီနိုင်ငံရေး ပြသနာကို အငြင်သာဆုံး အကျွှမ်းကျင်ဆုံး ကိုင်တွယ် သွားဖို့ ဆိုတာ ကတော့ အစိုးရ ဘက်ကရော တိုင်းရင်းသားတွေဘက် ကရော ကြိုးပမ်း အကောင်အထည် ဖော်သွား ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by PKD at 4:33 AM
ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စက သမိုင်းမျက်ခြေပြတ်နေရင်တော့ အစိုးရ ဘက်ကရော တိုင်းရင်းသားတွေဘက် ကရော ကြိုးပမ်း အကောင်အထည် ဖော်သွား ရဦးမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးမိမှာပါ။ ဒါဟာလုံးဝမမှန်တဲ့ သတ်မှတ်ချက်ပါ။ အမှန်က အစိုးရဘက်မှာသာလုံးဝတာဝန်ရှိခဲ့သလို ရှိနေဆဲလဲဖြစ်တယ်။ သုံးသပ်သူတွေဟာ တိုင်းရင်းသားအရေးကို လက်နက်ကိုင်တွေအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားလူထု တရပ်လုံးရဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်ပုံမရဘဲ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တွေပြီးရင် ပြီးတယ် လူထုကိုစာရင်းထဲထည့်တွက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ အထင်မြင်သေးမှုကိုအခြေခံရာက အထင်အမြင်မှားယွင်းမှုတွေဖြစ်နေပြီးခုလိုပြောနေကြတာဖြစ်တယ်။ ဘာ့ကြောင့်အစိုးရရဲ့ တာဝန်လုံးဝဖြစ်နေသေးလဲဆိုတာရှင်းပြရတာ အလွန်လွယ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ရလာတဲ့အစိုးရမှာလုံးဝတာဝန်ရှိတယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ လုံးဝတာဝန်ရှိတယ်။
ပြည်ထောင်စုလို့ တရားဝင်ပြောဆိုသတ်မှတ်သုံးနှုံးနေရဲ့ နဲ့က ပြည်ထောင်စု တရပ်ရဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံလုံးဝမရှိတာတွေ၊ပြည်နယ်တွေမှာ ဗဟိုအစိုးရကလုံးဝချုပ်ကိုင်ထားဆဲဖြစ်နေတာတွေ၊ တိုင်းရင်းသားဘာသာစာပေယဉ်ကျေးမှုကိုဗမာစာနဲ့တန်းတူဖြစ်အောင် ပြည်နယ်တွေမှာ အနဲဆုံးမူအရပြဌာန်းချက်လေးတောင်မရှိသေးတာတွေဟာ အစိုးရတာဝန်လား တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က ပြုပြင်ရမဲ့တာဝန်လား။ အစိုးရ လက်ထဲမှာနိုင်ငံအာဏာနဲ့ ဘဏ္ဍာငွေအားလုံးရှိနေတယ်။ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေကထွက်သမျှသယံဇာတအများစုဟာလဲအစိုးရလက်ထဲမှာဘဲ။
နိုင်ငံတကာဓနရှင်တွေရဲ့ အကူအညီတွေကလဲ အစိုးရဆီဘဲပုံအောရောက်တယ်။ ဒီအင်အားနဲ့အစိုးရဟာငြိမ်းချမ်းရေး စေတနာမှန်ရင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဥပဒေပြု ပြင်ရေးဆွဲလို့ လဲရနေတယ်။
ဒီကိစ္စခုမှဘာမှမသိဟန်ဆောင်လုပ်ပြီး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တွေကိုမေးနေစရာလိုလို့ လား။ သူတို့ ဒါကိုဘဲ ၁၉၄၉ ထဲကတောင်းလာခဲ့တာခုထိဘဲဟာ။ အဲဒါကို တခါမှမသိဖူးမကြားဘူးတဲ့ဟန်ဆောင်နေတာက မရိုးသားမှုကို ပြောင်တလင်းကြီးပြနေတာဘဲမဟုတ်လား။
ဒီကိစ္စအတွက် ဘာမှလက်ဆုတ်လက်ကိုင်မရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကတောင်း ဆိုတာလောက်ဘဲလုပ်နိုင်တယ်။ လုပ်ပေးရမှာက အစိုးရပါ။ ဒီအခြေခံတွေကို ဘာတခုမှမလုပ်ဘဲ တိုင်းရင်းသားတွေကဘာကိစ္စနဲ့ ယုံကြည်လာကြမယ်ထင်လဲ။ ခနခနတွေ့ ဆုံ ညစာတွေစား အရက်တွေသောက် အလာပသလာပတွေပြောရင်း မယားညီကိုတွေလို တဘက်နဲ့တဘက်ခင်မင်ယုံကြည်လာဖို့ စီမံထားတာလား။
ခုလုပ်နေသမျှဟာ အဲဒီအကြံအစည်ထက်ဘာမှ မပိုသေးဘူးလို့ မြင်နေရတယ်။ ဒီတော့ ဘေးကသုံးသပ်နေသူတွေရော ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်စားနေကြသူတွေရော နှစ်ဘက်လုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအမြစ်မဲ့ ငါ့စကားနွားရနေတာတွေကိုရပ်ပေးကြသင့်ပြီ။
ကဲ.. နဲနဲရေးမယ်ဗျာ။ သမတဦးသိန်းစိန်တက်လာကတည်းက တိုင်းရင်းသားတွေကို လက်နက်ချခိုင်းခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးအောင်မင်းပြောတယ်လေ..ဒါတရားဝင်စကား။ ငယ်ငယ်ကတည်းက လက်နက်ကိုင်တဲ့သူကို လက်နက်မကိုင်ပါနဲ့လို့ ဘယ်ပြောလို့ရမလဲ။ ချမ်းသာလာပြီဆိုရင် လက်နက်ကိုင်ပါလို့ပြောတာတောင် လက်နက်ကိုင်ချင်စိတ် ရှိချင်မှ ရှိတော့မယ် ဆိုတဲ့စကား။ ဒီစကားတွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် အဓိကက စီးပွားရေးဘဲ။ ဒါက ဦးသိန်းစိန်တို့ဘက်က ချည်းကပ်မှု။ တနည်းအားဖြင့် ဆေးမြီးတိုလေးတွေနဲ့ ကုတာ။ လက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကလည်း ဟုတ်တယ်။ တသက်လုံး ဆင်းရဲငတ်ပြတ်လာတာ အခုတော့ စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရတော့မယ်။ ငါအစုဝင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ သဘောထား။ နှစ်ပေါင်း ၆၀ကျော်ကြာ တန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌါန်းခွင့် တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်လာတာ။ အစိုးရဆိုတဲ့သူတွေက သောင်းကျန်းသူတွေလို့တောက်လျှောက်ပြောခဲ့တယ်။ အခုထက်ထိဘဲ။ တိုတိုပြောရရင် ဦးသိန်းစိန်တို့ဘက်က မင်းမှတ်ပြီလား။ မင်းတို့တွေ ငါတို့ကို နိုင်အောင်တိုက်လို့မရဘူးကွ။ ဒို့ဆီမှာ လူအင်အား လက်နက်အင်အား တနိုင်ငံလုံးရဲ့ငွေကို ဒို့ပိုင်ထားတာ။ ဒို့နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဘိ်ု့လိုအပ်တယ်။ ဒို့စီးပွားရေးလုပ်ဘို့လိုတယ်။ ဒါကို ခင်ဗျားတို့ဘက်က ပူးပေါင်းမလားဆိုတဲ့သဘောပါ။ အဓိကကတော့ လက်နက်စွန့်လိုက်ပါ။
အဲဒါကြောင့် သောင်းကျန်းသူတွေ မကြာခင်ချုပ်ငြိမ်းတော့မယ်လို့ သူ့ဘက်ကအပိုင်တွက်တာ။ တော်လှန်ရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် မုန်တိုင်းကြီး (၃)ရပ် မလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရမယ်။ ဒါကို ကြံ့ကြံ့မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် ဦးသိန်းစိန်ဝါးပြီလို့ ပြောပါရစေ။
Generally, I would like to point out something about Burma in the current time. The new Burmese Government wants to end the civil war as soon as possible. They get many advice and force from international to end the civil war because they want to end the sanction completely. May be they need more and more ...
If every ethnic groups do not have any specific goal and unity to end the civil war as their goals or if they want to follow the Burmese Government, "THE CIVIL WAR WILL END soon AS EAST TIMOR, NEPAL AND UNITED STATES OF AMERICA" in one day finally. I would like to give some proverbs as " He teaches ill, who teaches all and Soon learnt, soon forgotten".
အလကားပါကွာ ​ခွေး​အောင်​ဆန်း ​ပြောပြီးပြီ ​နော်င်​အတည်​ကျွန်​ပြည်​ မှည့်​လိမ့်​မည်​ ဆိုတာ အဲ ဒါကို ​ခွေးငြိမ်း​မော်င်​ ​ခွေး မူတူး​စေးဖိုး ​ခွေး ​ဂျော်​နီ တို့က သခင်​ဦးသိန်းစိန်​ ဒီည ကျွန်​​တော့မိန်းမ ကို လာလိုး ပါမနက်​ဖြန်​ ကျွန်​​တော့်​ သမီးအလှည့်​ ဆိုပြီးအလှည့်​ကျစနစ်​နဲ့ သွား​နေတာ မိုက်​ရိုင်းတယ်​လို့မထင်​နဲ့​​နော်​ ပြ ​ည်​ သူ ဘက်​က​နေ ​နေ ပြီးရင်​နာလွန်းလို့ပါ ။